Kone Si to Pursue Expansion Following Second Round of Investment | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceKone Si to Pursue Expansion Following Second Round of Investment
Yangon-based logistics startup Kone Si recently closed on an investment from Yangon Capital Partners,aMyanmar-focused venture capital set up by Trust Venture Partners, and Vietnam-based Nest Tech Holdings.
This represented the second round of investment for Kone Si as it received pre-seed funding from Phandeeyar in 2017.
Kone Si, an on-demand trucking platform, will use the six-figure (U.S. dollars) investment to grow its internal business resources and expand its team.
“We believe that understanding the power paradigm between the customers and truck suppliers is the key to success in the business,” said Kone Si CEO Zar Phyu Tint Lwin. “In addition to that, knowing the logistics freight flows throughout the year in the country is critical, because that way we can help our partner truckers get the return loads and operating efficiencies.”
According to Kone Si, businesses in Myanmar are facing challenges in outsourcing transportation to third parties because of unreliability, lack of standardized procedures and opaque pricing among truckers.
Small fleet owners and individual truckers on the other hand are struggling to get regular jobs due to fluctuating transport pricing controlled by large trucking groups as well as unethical working conditions.
Withatech-enabled platform and standardized operating procedures, Kone Si bridges the gap between shippers and small fleet truckers, enabling clients to get the right trucks anytime, anywhere with the right pricing and helping truckers to get suitable freight anytime, anywhere in Myanmar.
“The services designed by market-savvy management will bring down logistics cost,abottleneck of business operation across industries, and eventually benefit consumers in Myanmar,” said Shinsuke Goto, managing director of Yangon Capital Partners.
Led by co-founders Zar Phyu Tint Lwin (CEO) and Soe Pyae Aung (COO), the startup’s ecosystem comprises over 100 business shippers and over 2,000 truckers inaplatform with an average month-over-month sales growth of 30%.
Kone Si took part in Phandeeyar’s Startup Challenge and pre-accelerator program. It won Judges’ Choice Award at E27 Echelon Top 100 Myanmar Qualifiers Roadshow 2018 and the co-founder was named Founder of the Year at the ASEAN Rice Bowl Awards.
“ကုန်စည်” ပို့ဆောင်ရေး Platform တွင် YCP နှင့် Nest Tech Holdings တို့တွင်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် “ကုန်စည်” တွင် မြန်မာ့ဘဏ္ဍာရေး အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော YCP နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိ တက်သစ်စလုပ်ငန်းများအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Nest Tech Holdings တို့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ကုန်စည်”သည် ယခုထပ်မံရရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ကုန်စည်၏ နည်းပညာများကို အသုံးပြုသူ တိုးပွားစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ တိုးချဲ့ခန့်ထားခြင်းနှင့် ကုန်စည်၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူများပြားလာစေရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသော စီးပွားရေးမြို့များသို့ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက “ကုန်စည်”အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံရရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဖန်တီးရာထံမှ pre-seed ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ “ကုန်စည်” နည်းပညာဝန်ဆောင်ကို အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ ယာဉ်မောင်းတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကုန်စည်၏ CEOဖြစ်သူ ဒေါ်ဇာဖြူတင့်လွင်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရာတွင် ကားအချိန်မီရောက်ရှိမှုမရှိခြင်း၊ နည်းစနစ်ကျနမှုမရှိခြင်း၊ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားမှု အမျိုးမျိုးရှိနေခြင်း အစရှိသည့် အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ထို့ပြင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းများတွင်လည်း ယာဉ်ဂိတ်အဖွဲ့ထဲ အဖွဲ့ဝင်ထားခြင်းမရှိပါက ပုံမှန်ကုန်မရရှိခြင်း၊ ကုန်ရှားပါးခြင်း၊ ပေါများခြင်းတို့အပေါ်မူတည်၍ ကုန်တန်ဆာခများကို ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများမှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
“ကုန်စည်”အနေဖြင့် နည်းပညာသုံး ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းငယ်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်လိုသော လုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ကုန်စည်အား ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်တင်ယာဉ်များကို နေရာမရွေး မှန်ကန်သော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရရှိနိုင်ရန်နှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအတွက် ကုန်များ ပုံမှန်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ကူညီချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ကုန်စည်ရဲ့ ဝန်ဆောင်တွေဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်မြင့်မားမှုများကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ စားသုံးသူတွေအတွက်လည်း များစွာအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်” ဟု Yangon Capital Partners ၏ Managing Director ဖြစ်သူ Shinsuke Goto က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ကုန်စည် platform ကို အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်နှင့် ကုန်ပို့ယာဉ် အစီးရေ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး အသုံးပြုမှုသည် လစဉ် ပျမ်းမျှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကုန်စည်သည် ဖန်တီးရာ၏ ၂၀၁၇ခုနှစ် Startup Challenge တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး pre-accelerator အစီအစဉ်ကို ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကုန်စည်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် E27 Echelon TOP 100 Myanmar Qualifiers roadshow တွင် Judges’ choice award အပြင် ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် ASEAN Rice Bowal Awards တွင် Founder of the year ဆု စသည်တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
Previous articleAustralian, NZ Shares Hit Record Highs On Upbeat Outlook
Next articleIKBZ Insurance Testing KyoPay’s Invoice Discounting Platform